Ebe maka akwukwo: Fibromyalgia
Edemede na Fibromyalgia
Fibromyalgia bụ ọrịa na-adịghị ala ala nke na-enyekarị ihe ndabere maka ọtụtụ mgbaàmà dị iche iche na akara ngosi ahụike. N'ebe a, ị nwere ike ịgụkwu banyere isiokwu dị iche iche anyị dere banyere ọrịa mgbu na-adịghị ala ala fibromyalgia - ọ bụghịkwa ụdị ọgwụgwọ na usoro onwe onye dị maka nyocha a.
A makwaara Fibromyalgia dị ka rheumatism anụ ahụ dị nro. Ọnọdụ ahụ nwere ike ịgụnye mgbaàmà dịka mgbu na-adịghị ala ala na akwara na nkwonkwo, ike ọgwụgwụ na nkụda mmụọ.
7 Atụmatụ iji tachie obi na Fibromyalgia
13 / 06 / 2017 /1 Comment/i Fibromyalgia, Ahụ mgbu/av ewute
Ndụmọdụ 7 iji tachie obi na Fibromyalgia
See gbapụ fibromyalgia about na-aga ije n’elu mgbidi? Ka anyị nyere gị aka.
Fibromyalgia nwere ike ibute nnukwu nsogbu na ndụ kwa ụbọchị. Ọ pụrụ nnọọ isi ike inwe ọrịa mgbu na-adịghị ala ala. Nke a bụ ndụmọdụ na usoro 7 nwere ike inyere gị aka ịkwụsị mgbaàmà nke fibromyalgia ma mee ka ụbọchị gị dịkwuo mfe.
- Ọnụ maka Ịbabawanye Nghọta Ọrịa Ọrịa Na-adịghị Ala Ala
Ọtụtụ n'ime ndị nwere mgbu na-adịghị ala ala na-eche na a nụghị ha ma ọ bụ were ha kpọrọ ihe. Agaghị ekwe ka nke ahụ bụrụ ikpe. Anyị na-akwado ndị na-emetụta ihe mgbu na-adịghị ala ala ma jiri obiọma rịọ ka ị kesaa akụkọ a na mgbasa ozi ọha na eze maka nghọta ka ukwuu na nsogbu a. Daalụ n'ọdịnihu. Enwere onwe gị iso anyị site na Facebook og YouTube.
- Na ngalaba nkuzi anyị na Vondtklinikkene na Oslo (Lambertseterna Viken (Eidsvoll ụda og Råholt) Ndị dọkịta anyị nwere ọkachamara ọkachamara dị elu pụrụ iche na nyocha, ọgwụgwọ na ọzụzụ mmezi nke mgbu na-adịghị ala ala. Mụ na anyị, a ga-eji gị akpọrọ ihe mgbe niile. Pịa na njikọ ma ọ bụ ya ịgụkwu gbasara ngalaba anyị.
Pịgharịa gaa hụ vidiyo mgbatị ahụ abụọ nwere mmega ahụ na usoro ntụrụndụ nwere ike ịbara gị aka na fibromyalgia.
Emetụta? Soro ndị otu Facebook «Rheumatism - Norway: Nnyocha na Akụkọ»Maka mmelite ọhụụ gbasara nyocha na ide banyere ihe gbasara mgbasa ozi gbasara ọrịa a na nsogbu ndị ọzọ. N'ebe a, ndị otu nwekwara ike ịnweta enyemaka na nkwado - n'oge niile ụbọchị - site na mgbanwe maka ahụmịhe na ndụmọdụ ha.
1. Obi erughị ala
Nchegbu nwere ike ịkpalite ma kpatara "ọkụ ọkụ" na fibromyalgia.
Mbelata nchekasị na ndụ kwa ụbọchị nwere ike iduga ndụ ndụ ka mma yana obere mgbaàmà. Ụfọdụ ụzọ akwadoro iji nagide nrụgide bụ yoga, uche, acupressure, mgbatị ahụ na ntụgharị uche. Reatzọ iku ume na ịma usoro ndị dị otú ahụ nwekwara ike inye aka.
- Wepụta oge iji zuru ike
Mụta ka ọ dịrị onwe gị mfe n'oge a nke na-esetịpụ ụkpụrụ dị elu. Anyị na-akwadosi ike nnọkọ ntụrụndụ kwa ụbọchị acupressure ute (pịa ebe a iji gụkwuo - njikọ ahụ ga-emepe na windo ọhụrụ). Ụdị dị iche iche a nwekwara ohiri isi olu gụnyere nke na-eme ka ọ dị mfe ịrụ ọrụ n'ime akwara dị n'azụ na olu
Ọzọkwa gụ: 7 Ihe Na-akpata Nsogbu Na-emetụta Fibromyalgia
Pịa na njikọ dị n’elu ka ịgụọ ederede.
2. Mgbe niile ahaziri Ọzụzụ
Imega fibromyalgia nwere ike isi ezigbo ike.
Otú ọ dị, ụfọdụ ụdị mmega ahụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma - dịka mmega ahụ mgbe nile, nke dị ala, dị ka ịga ije ma ọ bụ imega ahụ n'ime ọdọ mmiri ọkụ bụ otu n'ime ọgwụgwọ kachasị mma maka fibromyalgia.
Ọ ga - enyere gị aka belata ihe mgbu na isi ike, ma nye gị ikike nghọta ka ukwuu banyere nchọpụta mgbu na - adịghị ala ala. Gwa dọkịta gị, onye na-ahụ maka ahụike gị, chiropractor ma ọ bụ onye na-ahụ maka ụlọ ọgwụ ka ị chọpụta ụdị mmemme mmega ahụ nwere ike ịkacha mma maka gị - anyị na-enwekwa obi ụtọ inyere gị aka site na ọwa Youtube anyị ma ọ bụ otu n'ime ụlọ ọgwụ anyị na-emekọrịta ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Fibromyalgia na-ebute mgbu na isi ike n'ime akwara na nkwonkwo nke ahụ. Nke a bụ mmemme mmega ahụ mmadụ ise nwere ike inyere gị aka idobe azụ, hips na pelvis na-agagharị. Pịa n'okpuru ka ihu ihe omume.
Na - Mmega 7 maka Rheumatists:
Vidiyo a anaghị amalite mgbe ị pịrị ya? Gbalịa imelite ihe nchọgharị gị ma ọ bụ lelee ya na ọwa YouTube anyị. Chetakwa ịdenye aha - kpamkpam n'efu - na ọwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme na ọzụzụ ka mma.
3. Ezigbo Bath
Happy nwere obi ụtọ izu ike na mmiri ịsa ahụ? O nwere ike ime gị mma.
Yinggha n'ime mmiri ịsa ahụ nwere ike ime ka akwara zuo ike ma mee ka ihe mgbu kwụsị ime ụlọ elu. Ụdị okpomọkụ a nwere ike ịkwalite ọkwa endorphin n'ime ahụ - nke na-egbochi mgbaàmà mgbu ma nwee ike ime ka ụra dịkwuo mma. Anyị na-akwadoghị ojiji nke reusable okpomọkụ mkpọ (lee ihe atụ ebe a - njikọ ga-emepe na windo ọhụrụ). Mkpọ ahụ na-arụ ọrụ site na kpo oku ma tinyezie ya n'ahụ ahụ siri ike na mgbu.
4. Gbutuo Caffeine
Na-amasị iko kọfị siri ike? Ọ nwere ike bụrụ àgwà ọjọọ nye anyị na fibro, dị mwute ikwu.
Caffeine bụ ihe na-akpali akpali- nke pụtara na ọ na - akpali obi na Central ụjọ sistemụ ka ha nọrọ ‘n’ọkwa dị elu’. Mgbe nyocha egosila na na fibromyalgia anyị nwere eriri akwara na-arụ ọrụ nke ukwuu, anyị na-achọpụta na nke a abụghị ihe kacha mma. Mana anyị agaghị ewepụ kọfị gị kpamkpam - nke ahụ gaara eme nke ọma n'ụzọ dị egwu. Kama gbalịa ịgbapụ ntakịrị.
N'aka nke ya, nke a nwere ike ibute ezigbo ụra na nchekasị. N’ihi ya, nwaa ịbelata ịffeụ caffeine, ebe ndị nwere fibromyalgia nwere usoro ụjọ na-arụ ọrụ nke ukwuu. Ihe kacha mkpa bụ ka ị ghara ị coffeeụ kọfị na mmiri ọ fromụ energyụ n’ehihie gaa n'ihu. Enwere ike ịnwale ịgbanye na nhọrọ decaffeinated?
Ọzọkwa gụ: Ndị a bụ ụdị 7 dị iche iche nke Fibromyalgia mgbu
Wepụta oge maka onwe gị - kwa ụbọchị
Oge ezigbo oge nwere ike ịbụ ihe dị mkpa karịa anyị na fibromyalgia.
Fibromyalgia nwere ike ime ka ndụ sie ike na nsogbu niile ọ na-atụba gị, yabụ jide n'aka na ị na-ewepụta oge maka onwe gị kwa ụbọchị dịka akụkụ nke nlekọta onwe gị. Kporie ihe ntụrụndụ gị, gee egwu, zuru ike - mee ihe ga-eme ka ọ dị gị mma.
Oge dị otú a nwere ike ime ka ndụ nwekwuo nguzozi, belata ogo nrụgide n'ahụ gị ma nye gị ike karịa na ndụ gị kwa ụbọchị. Eleghi anya elekere nke ọgwụgwọ anụ ahụ kwa ọnwa (dịka ọmụmaatụ, ọgwụgwọ anụ ahụ, chiropractic ọhụụ ma ọ bụ igba okpukpu?) nwekwara ike ịbụ ezigbo echiche?
6. Kwuo banyere ihe mgbu
Ejidela mgbu gị. Ọ dịghịrị gị mma.
Ọtụtụ ndị nwere fibromyalgia na-aga ma debe ihe mgbu n'onwe ha - rue mgbe ọ na-agaghị na-aga ma na mmetụta uche weghara. Fibromyalgia na - ebute nchekasị maka onwe gị, kamakwa ndị gbara gị gburugburu - yabụ nkwukọrịta bụ isi ihe.
Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị mma - kwuo ya. Kwuo na ị ga-enwe oge n'efu, ịsa ahụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ihe yiri ya n'ihi na ugbu a ọ bụ na fibromyalgia nọ na elu ya. Ubon ye mme ufan ẹkpenyene ndidiọn̄ọ udọn̄ọ fo ye se anamde ọdiọk. N'inwe ụdị ihe ọmụma ahụ, ha nwere ike ịbụ akụkụ nke ihe ngwọta mgbe ịchọrọ enyemaka.
7. Mụta ịsị Mba
A na-akpọkarị fibromyalgia 'ọrịa a na-adịghị ahụ anya'.
A na-akpọ ya n'ihi na ọ nwere ike isiri ndị gbara gị gburugburu ike ịhụ na ị na-enwe ihe mgbu ma ọ bụ na ị na-ata ahụhụ na nkịtị. N'ebe a, ọ dị ezigbo mkpa ka ị mụta ịtọ onwe gị oke na ihe ị nwere ike ịnagide. Ikwesiri mụta ịsị MBA mgbe ndị mmadụ chọrọ nnukwu akụkụ gị n'etiti ọrụ na ndụ kwa ụbọchị - ọbụlagodi na ọ ga-emegide ụdị enyemaka gị na ụkpụrụ gị.
Anyị na-arịọ ndị niile nwere nsogbu a ka ha sonyere n'òtù Facebook «Rheumatism - Norway: Nnyocha na Akụkọ»- ebe a ị nwere ike ikwu maka ọnọdụ gị ma nweta ezigbo ndụmọdụ site na ndị nwere otu obi.
Nwere onwe gị ịkekọrịta na Social Media
Ọzọ, ya mere anyị chọrọ å rịọ nke ọma ka ị kee isiokwu a na mgbasa ozi ma ọ bụ na blọgụ gị (nweere onwe gị ijikọta ozugbo na isiokwu ahụ). Ghọta na ịbawanye elekwasị anya bụ ihe mbụ a na-eme iji mee ka ndụ ka mma kwa ụbọchị maka ndị nwere mgbu na-adịghị ala ala.
Aro ndị ga - enyere gị aka ịlụ ọgụ fibromyalgia na ọrịa mgbu na - adịghị ala ala:
Nke A: Kekọrịta na FB - Detuo adreesị webụsaịtị wee mado ya na ibe facebook gị ma ọ bụ na otu facebook dị mkpa ị bụ onye otu. Ma ọ bụ pịa bọtịnụ "SHARE" dị n'okpuru ka ịkekọrịta ọkwa n'ihu na facebook gị.
Emetụ nke a iji kesaa n'ihu. Nnukwu ekele diri onye ọ bụla na-enyere aka ịkwalite nghọta nke ọrịa nhụjuanya na ọrịa fibromyalgia!
Nke B: Jikọọ aka na ederede na blọọgụ gị.
Nke CH: Soro na nha Peeji Facebook anyị (pịa ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ)
ma chetakwa ịhapụ ọkwa kpakpando ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu ahụ:
Ajụjụ? Ma ọ bụ na ị chọrọ ide akwụkwọ oge atọrọ n'otu n'ime ụlọọgwụ anyị nwere mmekọ?
Anyị na-enye nyocha nke oge a, ọgwụgwọ na ọzụzụ nke mgbu na-adịghị ala ala.
Enwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị site na otu n'ime ụlọ ọgwụ anyị pụrụ iche (nleba anya ụlọ ọgwụ ga-emepe na windo ọhụrụ) ma ọ bụ gbanye peeji Facebook anyị (Vondtklinikkene - Health and Exercise) ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Maka oge nhọpụta, anyị nwere ntinye akwụkwọ ntanetị nke awa XNUMX n'ụlọ ọgwụ dị iche iche ka ị nwee ike ịchọta oge nlebara anya nke dabara gị mma. Ị nwekwara ike ịkpọ anyị n'ime oge mmeghe ụlọ ọgwụ ahụ. Anyị nwere ngalaba interdisciplinary na Oslo (gụnyere Lambertseterna Viken (Råholt og Ntughari). Ndị ọkachamara na-agwọ ọrịa anyị na-atụ anya ịnụ gị.
Peeji ọzọ: Mgbatị mmegharị maka ndị nwere Fibromyalgia
Pịa na foto ma ọ bụ njikọ dị n’elu.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/7-TIPS-FOR-Å-HOLDE-UT-MED-FIBROMYALGI.jpg?media=1648573622 368 700 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2017-06-13 20:07:332022-03-22 16:15:267 Atụmatụ iji tachie obi na Fibromyalgia
6 Ihe omume maka ndi nwere Fibromyalgia
12 / 09 / 2017 /0 Comments/i Fibromyalgia, Ahụ mgbu, Mmega Ahụ na Mmega Ahụ/av ewute
Fibromyalgia bụ nkwarụ na-adịghị ala ala nke na-akpata mgbu juputara na mmụba banyere akwara na akwara.
Ọnọdụ ahụ nwere ike ime ka ọzụzụ oge niile sie ike nke ukwuu na ọ fọrọ nke nta ka ọ gaghị ekwe omume mgbe ụfọdụ - yabụ anyị ewepụtala usoro ọzụzụ nke nwere mmega ahụ dị nro 6 emebere maka ndị nwere ahụike. fibromyalgia. Olileanya na nke a nwere ike inye ahụ efe ma nyere gị aka inye gị ndụ ka mma kwa ụbọchị. Anyị na-akwadokwa ọzụzụ n’ime ọdọ mmiri a na-asa mmiri ọ bụrụ na ị nwere ohere ime otú ahụ.
- Na ngalaba nkuzi anyị na Vondtklinikkene na Oslo (Lambertseterna Viken (Eidsvoll ụda og Råholt) Ndị dọkịta anyị nwere ọkachamara ọkachamara dị elu pụrụ iche na nyocha, ọgwụgwọ na ọzụzụ mmezi nke mgbu na-adịghị ala ala. Pịa na njikọ ma ọ bụ ya ịgụkwu gbasara ngalaba anyị.
Ụgwọ: Pịgharịa gaa n'ala ka ịhụ vidiyo mmega ahụ nwere mmega ahụ ahaziri maka ndị nwere fibromyalgia, yana ịgụkwu gbasara usoro izu ike.
Ọzọkwa gụ: 7 Atụmatụ iji tachie obi na Fibromyalgia
VIDIO: Mgbatị Ike 6 maka anyị na Fibromyalgia
N'ebe a, ị ga - ahụ usoro mmega ahụ ahaziri maka ndị nwere fibromyalgia mebere chiropractor Alexander Andorff - na mmekota na physiotherapist na mpaghara ya rheumatism otu. Pịa na vidiyo dị n'okpuru ebe a iji hụ ihe omume.
Fibromyalgia gụnyere oke ịba ụba nke uru ahụ na uru ahụ. N'okpuru ebe a bụ ihe omume ise nwere ike inyere gị aka ịtọghe ke akwara na akwara ike.
Vidio ndị ahụ ọ masịrị gị? Ọ bụrụ na ị masịrị ha, anyị ga-enwe ekele maka ịdebanye aha na ọwa YouTube anyị wee nye anyị mkpịsị aka na mgbasa ozi ọha. Ọ pụtara ọtụtụ ihe nye anyị. Nnukwu ekele!
Na nbuso agha
Anyị na-akwado onye ọ bụla nwere ihe mgbu na-adịghị ala ala na mgba ha na anyị nwere olileanya na ị ga-akwado ọrụ anyị site na ịchọrọ saịtị anyị site na Facebook ma denye aha na ọwa vidiyo anyị na YouTube. Anyị na-achọ ịkọ banyere otu nkwado Rheumatism na Ahụhụ Ọrịa - Norway: Nnyocha na akụkọ - nke bụ otu Facebook efu maka ndị nwere mgbu na-adịghị ala ala ebe ị maara ozi na azịza.
Ekwesịrị itinyekwu uche na nyocha maka ọnọdụ na-emetụta ọtụtụ mmadụ - ya mere anyị ji nwayọ rịọ gị ka ị kesaa akụkọ a na mgbasa ozi mgbasa ozi, ọkacha mma site na ibe Facebook anyị wee kwuo, "Ee maka nyocha ndị ọzọ gbasara fibromyalgia". N'ụzọ dị otu a, mmadụ nwere ike ime 'ọrịa a na-adịghị ahụ anya'.
Ahaziri iche na Mgbatị
Ọ dị mkpa ịmara oke ya iji zere "ọkụ ọkụ" na mmebi. Yabụ, ọ ka mma ịnwale ọzụzụ obere ume oge niile karịa ijide "onye na-anya ụgbọ mmiri", dịka nke ikpeazụ nwere ike, ọ bụrụ na emeghị ya nke ọma, tinye ahụ ahụ ahaghị nhata ma bute mgbu karịa.
Ọzọkwa gụ: 7 Ihe Ndị Na-eme Nsogbu Pụrụ Inwe Mmebi Fibromyalgia
Kirie ihe onyonyo a dị n’elu ka ịgụọ ederede.
1. Ntụrụndụ: Usoro iku ume & Acupressure
Mgba ume bụ ngwa ọrụ dị mkpa n'ọgụ megide nrụgide akwara na mgbu. Site n'inwe ume ume dị mma karị, nke a nwere ike ime ka mgbanwe dịkwuo mma na ọgịrịga ahụ yana njikọta akwara ndị metụtara ya, nke na-eduga na mbelata mgbatị akwara.
Ụkpụrụ bụ isi nke ihe a na-ewere dị ka usoro iku ume mbụ bụ isi bụ iku ume ugboro 5 n'ime otu nkeji.. Tozọ isi nweta nke a bụ iku ume miri emi ma gụọ ka mmadụ ise, tupu ịgwụ ike gabiga ugboro ugboro gụọ 5.
Onye na-agwọ ọrịa n'azụ usoro a chọpụtara na nke a nwere mmetụta kachasị mma na mgbanwe mgbanwe obi na-emetụta eziokwu ahụ bụ na a na-edozi ya n'ọtụtụ dị elu ma si otú a dị njikere ịlụso mmeghachi omume nrụgide ọgụ.
eguzogide na-eku ume
Usoro iku ume ọzọ amara bụ iku ume megide nguzogide. Nke a kwesịrị ime ka ahụ zuru ike wee banye n'ọnọdụ dị jụụ karị. A na-eme usoro iku ume site na iku ume miri emi wee na-agwụ site na ọnụ dị nso - nke mere na egbugbere ọnụ anaghị enwe nnukwu ụzọ dị otú a, na ị ga-eme ka ikuku 'gbochie nguzogide.
Zọ kachasị mfe iji rụọ 'iku ume iku ume' bụ iku ume site n'ọnụ ọnụ ma banye imi.
Ntụrụndụ na Acupressure Mat
Enwere ike iji onwe ya mee ihe nke ọma iji mee ka ahụmịka ahụ dị jụụ acupressure ute (lee ihe atụ ebe a - njikọ ahụ mepee na windo ọhụrụ). Anyị na-akwado ka ị malite na nnọkọ ihe dị ka nkeji iri na ise wee rụọ ọrụ gị ruo ogologo oge ka ahụ na-anabatakwu ebe ịhịa aka n'ahụ. Pịa ya ịgụkwu gbasara ute ntụrụndụ. Ihe kachasị mma gbasara ụdịdị a anyị na-ejikọta na ya bụ na ọ na-abịa na akụkụ olu nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịrụ ọrụ n'ihu mọzụlụ siri ike n'olu.
2. Ikpo oku na itinye aka
Njikọ nkwonkwo na mgbu anụ ahụ na-abụkarị akụkụ na-agwụ ike nke ndụ kwa ụbọchị maka ndị na-emetụta fibromyalgia. Ya mere, ọ dị oke mkpa ka a na-eme ka ahụ na-aga n'ihu na-agbatị oge na mmegharị ọkụ n'ụbọchị dum - ịgbatị agbatị mgbe nile nwere ike n'ezie ime ka nkwonkwo na-agagharị ngwa ngwa ma ọbara na-aga na akwara.
Nke a bụ eziokwu karịsịa maka nnukwu akwara dị ka hamstrings, mọzụlụ ụkwụ, mọzụlụ oche, azụ, olu na ubu. Ọ ga-adị mma ma ị malite iji oge mgbakwunye na-ebido ụbọchị ahụ iji mee ka ìgwè dị n'olu nwee nnukwu nsogbu.
3. Mgbatị ahụ Ikike zuru oke maka azụ na azụ
Ihe omume a jiri nwayọ nwayọ ma gbasaa spain.
Malite Onodu: Guzo na akụkụ anọ niile n’elu mat. Gbalịa idobe olu gị na azụ na nnọpụiche, dịtụ ogologo.
Ịgbatị: wee weda ikpere gị n'ikiri ụkwụ gị - na nwayọ ije. Cheta idozi onodu ogha n’agha n’iile. Jide eriri ahụ ihe dị ka sekọnd iri atọ. Naanị uwe ruo oge ị nwere ike iru gị.
Ugboro ole? Tinyegharịa mmega ahụ ugboro 4-5. Enwere ike ịme mmega ahụ ugboro 3-4 n'ụbọchị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
4. Ọzụzụ ọdọ mmiri na-ekpo ọkụ
Ọtụtụ ndị nwere fibromyalgia na ọrịa rheumatic na-erite uru site na ọzụzụ n'ime ọdọ mmiri ọkụ.
Ọtụtụ ndị nwere fibromyalgia, rheumatism na mgbu na-adịghị ala ala maara na imega ahụ n'ime mmiri ọkụ nwere ike ịdị nwayọọ karị - na ọ na-etinyekwu uche na nkwonkwo siri ike na akwara mgbu.
Anyị bụ uche anyị na ọzụzụ mmiri ọdọ mmiri kwesịrị ịbụ mpaghara a na-elekwasị anya maka igbochi na ọgwụgwọ nke akwara ogologo oge na ọrịa nkwonkwo. O di nwute, eziokwu bu na onyinye nile di otu a na-emechi emechi mgbe nile. Anyi nwere olile anya na agbanweela omume a ma gbadoro anya na usoro nkuzi a.
5. Ngosipụta Ugo Ndị Dị Ntorobịa na Ọzụzụ (NIILE)
Nke a bụ nhọrọ nke mmega ahụ ahaziri maka ndị nwere fibromyalgia, nchọpụta mgbu ndị ọzọ na-adịghị ala ala na ọrịa rheumatic. Anyị na-atụ anya na ị ga-ahụ ha bara uru - na ị họrọkwara ịkekọrịta ha (ma ọ bụ isiokwu ahụ) na ndị enyi na ndị enyi nwere otu nyocha ahụ dịka gị.
VIDEO - Mmega 7 maka Rheumatists
Vidiyo a anaghị amalite mgbe ị pịrị ya? Gbalịa imelite ihe nchọgharị gị ma ọ bụ lelee ya na ọwa YouTube anyị. Chetakwa ịdebanye aha na ọwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme ọzụzụ na mmega ahụ ka mma.
Ọtụtụ ndị nwere fibromyalgia na-ewutekwa ha oge ụfọdụ sciatica mgbu radieshon na ụkwụ. Isesrụ mmega ahụ na ị na-eme mgbatị ahụ dị ka egosiri n'okpuru ebe a site n'ịchịkọta ihe dị mfe nwere ike iduga n'ọkpụkpụ akwara na-akpụ akpụ na obere mgbatị akwara - nke n'aka nke ya nwere ike ịkpata obere sciatica. Ọ na-atụ aro ka ị gbatịa 30-60 sekọnd karịrị 3 tent.
VIDIO: Mgbatị Ahụ 4 maka Piriformis Syndrome
6. Yoga na iche echiche
Yoga nwere ike ime anyị obi ụtọ na fibromyalgia.
Mgbe ụfọdụ, ihe mgbu nwere ike ịka njọ ma mgbe ahụ ọ nwere ike ịba uru iji mgbatị yoga dị nro, usoro iku ume na ntụgharị uche iji nwetaghachi njikwa. Ọtụtụ na-ejikọta yoga na acupressure ute.
Site na iji yoga na ntụgharị uche, ị nwere ike jiri nwayọ na-ejide onwe gị ma zere onwe gị ihe mgbu mgbe ọ kachasị njọ. Otu yoga nwekwara ike ịdị mma na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ nwekwara ike ịbụ ebe a na-agbanweta ndụmọdụ na ahụmịhe na usoro ọgwụgwọ dị iche iche.
Nke a bụ ụfọdụ mmega yoga dị iche iche nke nwere ike ịnwale (njikọ ndị ahụ na-emeghe na windo ọhụrụ):
- 5 Ihe omumu Yoga maka akwara mgbu
- 5 Mmega ahụ Yoga maka azụ mgbu
- 5 Yoga Mmega megide Stiff Neck
Nkwado Onwe-Aka akwadoro maka Rheumatism na Ahụhụ Na-adịghị Ala
Arnica ude ma ọ bụ Igwe eji ekpo oku (ọtụtụ akụkọ gbasara mmelite eji eme ihe)
Nchịkọta: Mmega ahụ na usoro izu ike maka ndị nwere Fibromyalgia
Fibromyalgia nwere ike bụrụ nsogbu na enweghị atụ na ndụ kwa ụbọchị.
Ya mere, ọ dị mkpa ịmara mmega ahụ dị nro nke dịkwa mma maka ndị nwere nnukwu mmụọ ọgụgụ isi na akwara na nkwonkwo. A na-adụ onye ọ bụla ume isonye na ndị otu Facebook na-akwado n'efu Rheumatism na Ahụhụ Ọrịa - Norway: Nnyocha na akụkọ ebe ị nwere ike ịgwa ndị nwere ụdị mmụọ okwu, kpachara anya na akụkọ gbasara isiokwu a na ịkọrịta ahụmịhe.
Ọzọ, anyị ga-achọ ka ị kesaa akụkọ a na mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ site na blọgụ gị (na-enwere onwe gị ijikọ ozugbo na isiokwu ahụ). Ịghọta na mmụba na-elekwasị anya bụ nzọụkwụ mbụ iji nweta ndụ kwa ụbọchị ka mma maka ndị nwere fibromyalgia.
Aro maka otu esi enyere aka
Nke A: Kekọrịta na FB ozugbo - Detuo adreesị webụsaịtị wee mado ya na ibe facebook gị ma ọ bụ na otu facebook dị mkpa ị bụ onye otu. Ma ọ bụ pịa bọtịnụ "SHARE" dị n'okpuru ka ịkekọrịta ọkwa n'ihu na facebook gị.
(Pịa ebe a iji kerịta)
Nnukwu ekele diri onye ọ bụla na-enyere aka ịbawanyewanye nghọta banyere fibromyalgia na ọrịa mgbu na-adịghị ala ala.
Nke B: Jikọọ na isiokwu na blọọgụ gị.
Nke C: Soro na nha anya Peeji Facebook anyị (pịa ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ)
Anyị na-enye nyocha nke oge a, ọgwụgwọ na nhazigharị maka mgbu na-adịghị ala ala.
Peeji ọzọ: - Nnyocha: Nke a bụ nri Fibromyalgia kacha mma
Pịa na foto dị n’elu ịkwaga na peeji na-esonụ.
- Nwere ike iso Vondt.net na ỊTUBE
- Nwere ike iso Vondt.net na Facebook
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/6-øvelser-mot-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2017-09-12 15:45:552022-03-22 15:39:076 Ihe omume maka ndi nwere Fibromyalgia
Peeji nke 1 nke 11123>»